Onye nrụpụta ihe ngosi LED - JYLED
Atụmatụ JYLED ewebata
Mbido & Mfe
Naanị jikọọ ihuenyo LED na ngwaọrụ ọ bụla wee jikwaa ọdịnaya gị ozugbo na ngwanrọ LED, ndị otu ọkachamara anyị nwekwara ike inyere gị aka njikwa anya wee kuziere gị otu esi eme ya.
Egwuregwu ngụ oge
Ngosipụta ihe ngosi ndị a na-eduzi na-agbanwe ma dị irè iji nyere gị aka ịchịkwa ma gosipụta ọdịnaya ịchọrọ, ma ọ bụ ihuenyo vidiyo dị elu ma ọ bụ foto mara mma, ọ naghị esiri ike maka ngosi LED.
Mgbasa ngwa ngwa
Nwere ike gbasaa ozi mgbasa ozi ọ bụla yana vidiyo nkwado na-adọta ndị ahịa lekwasịrị anya wee bulie uru. Ihuenyo LED azụmahịa bụ nhọrọ mbụ maka mgbasa ozi ụlọ ọrụ iji mezuo ebumnuche a.
Enweghị oriri zoro ezo
Site na mmepụta site na nrụnye yana nkwado ndị ahịa na-aga n'ihu na nkwado teknụzụ, jikwaa ihuenyo dijitalụ LED gị ngwa ngwa na usoro ọnụahịa anyị dị mfe na enweghị ụgwọ ọzọ.
Họrọ Ngwaahịa Gị
Ihuenyo mgbazinye n'èzí
ihuenyo ngosipụta dị n'èzí kwụziri
Ihuenyo Ngosipụta Ngosipụta Ulo ala LED
Ihuenyo Ngosipụta ogwe ọkụ ọkụ LED
Ọ bụrụ na ị dị njikere ịnweta mgbidi vidiyo LED, anyị ga-achọ ịnụ gị!
Họrọ ọnọdụ ngwa gị
Nke a bụ ụfọdụ ndapụta ngwa ngwa
Ihuenyo Tile Ala LED
Na-atụ aro isiokwu
Kedu ka esi eme ihuenyo 3D led?
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọchịchọ maka mgbasa ozi n'èzí nọgidere na-abawanye, na nkà na ụzụ nke n'èzí LED nnukwu ihuenyo nọgidere na-eto eto. Karịsịa, ọdịdị nke ihuenyo 3D LED ugboro ugboro.
Ngosipụta LED dị mma VS mini LED ngosi VS micro LED ngosi
2020 ga-abụ afọ mbụ nke ngosi micro LED. A na-ekwu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke Apple tinyere ga-ewetakwa ihe ngosi micro LED maka Apple Watch na 2023: nke ikpeazụ ga-enwe nnukwu uru dị ka nchapụta dị elu.
Otu esi agbakọta modul LED n'ime igbe LED
Enwere ọtụtụ ndị ahịa nwere ikike aka siri ike, ndị na-achọsi ike ka modul LED si agbakọta? Achọrọ ịmụta ma chịkọta ya n'onwe m. Mgbe ahụ, anyị ga-amalite site na nhazi nke igbe ahụ
Gịnị bụ Ihuenyo abnormity LED? Kedu ụdị dị?
Enwere ihuenyo transperent P3.91 LED kpamkpam?
Gịnị bụ echichi ụzọ nke P2.976 transperent LED ngosi?
Obere oghere LED VS Mini LED
LED ọ dị mma karịa LCD?
Ikanam obere oghere ngosi VS LCD splicing ihuenyo